Mawduuca 7 Qaabkadhismeedka dadka iyo xaaladda dabeecadda
Xaq ahaan loo simman yahey (allemannsretten)
Kalluumeysiga xilliga firaaqada
Xayawaanka caadiga ah ee Norwey
Waxa 18000 sanno kahor Norwey dulsaaraa baraf. Si tartiib ah ayey diirimaad u noqotey, barafkiina wuu dhalaaley, dadkii ugu horeeyeyna waxey 11000 sanno kahor soo dulmareen barafka iyaga oo ka jimi Jarmalka. Waxey ku noolaayeen dabashada xayaawaanka. Waxey adeegsan jireen dhagax markey qalab sameysanayaan, dharkana waxey ka sameysan jireen haraga xayawaanka. Waxaanu waqtigan u naqaan waqtigii dhagaxa.
Marba marka ka dambeysa ayey hawadu kululaaneysey, oo waxa soo baxey keymo waaweyn. Dadku wuxuu bilaabey inuu dhulka beerto, waxeyna yeesheen xoolo. Waxey barteen sameynta iyo soohdinta dunta waxeyna dhar ka sameysteen dhogorta idaha. Waxey midiyo, faashash iyo qalab kale ka sameysteen birta. Qoysas waaweyn ayaa wada noolaa. Awowga ayaa hogaamiye ka ahaa beerta. Qoys weyn oo sidan oo kale ah waxa la odhan jirey reer (ætt). Qofka kasta wuxuu reerkiisu siiyey nadangelyo, ilaalin iyo caawimo. Khilaafka dhexmara reeraha waxa lagu xallili jirey golaha. Reeraha qaar ka mid ah ayaa waxey noqdeen hodan iyo xoog, oo waxey ganacsi la yeesheen dadka kale ee yurubiyanka ah.
Markey aheyd 793 ayaa dad noorwiiji ahi waxey weerar ku qaadeen qalcadda diinta ee loo yiqiin Lindisfarne oo ku taalley xeebta bari ee Waqooyinka Ingiriiska. Markii ugu horeysey ayey dadka ka yimi Waqooyiga ey ka ciyaareen door laxaadleh taariikhda Yurub. Swiidhishka, Dheynishka iyo Noorwiijigu waxey lahaayeen doonyo fiicfiican oo waxey tegi jireen socdaalo dhaadheer oo xagga badda ah. Waxa loogu yeedhi jirey vikinger. Wey ganacsan jireen, wax dhici jireen, dagaalami jireen oo soo qabsan jireen adoomo. Dadka vikingku waxey lahaayeen diin u gaar ah oo leh ilaahyo badan. Viking fara badan ayaa Norwey ka dhoofey oo degey meelo kale.
Boggan shabakada netka waa qeyb dheeraad u ah mawduuca 7aad ee buugga waxbarashada (emne 7 i læreboka). Halkan waxaad ka akhriyi kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduucyadan hoos ku qoran:
Kalluumeysiga xilliga firaaqada (fritidsfiske)
Xayawaanka caadiga ah Norwey